Amarillo angle angle drive drive for sale
Tags: Amarillo angle angle drive drive for sale
I-Amarillo, inkampani ibisebenza e-Amarillo, eTexas kusukela ngo-1917. Kusukela ngo-1934, le nkampani ibikhiqiza futhi ithengisa ulayini wama-gearbox ongenakulinganiswa ngaphakathi kwe. Ulayini womkhiqizo wokuqala wenkampani ufaka ama-angle angakwesokudla wezinhlelo zokusebenza eziqonde mpo ze-turbo pump. Ekuqaleni, lapho kuhlanganiswa namaphampu nezinjini, la maqhuqhuva e-angle engakwesokudla ayevame ukusetshenziselwa ukunisela kwezolimo.
I-TX 09 HB
I-TX 09 KB
I-TX 09 HM
I-TX 09 RR
LK10YR TERASAKI LK 10 Y / R HANDLE CLUTH Amarillo / Rojo
I-BA9SLG24 TERASAKI LAMP.LED 24V AMARILLO
KKU3PYR TERASAKI K / KU.3P Y / R DIRECT HANDLE FOR KU Amarillo / Rojo
LMG TERASAKI PILOTO MONOLITICO LM AMARILLO
Umkhiqizo wethu ojwayelekile ukhishwa kwabanye. Ama-Industrial Amarillo Gear's pump pump drives anezinhloso ezakhelwe ukuhlangabezana kangcono nezidingo zezicelo zawo ezithile. Idizayinelwe ngamazinga we-AGMA, futhi yakhelwe ukuqondiswa okunamandla, ama-Amarillo Gear pump drives ngeke adumaze.
Izinhlelo zokuhambisa amanzi ezimbonini zisebenza ngokuqhubekayo, ngakho-ke ukuthembeka kwamapayipi e-Amarillo Gear kubenze bakhetha izikhungo zamandla emhlabeni wonke amashumi eminyaka. Amabhokisi wethu wamagiya awasebenzi kuzikhungo zenuzi kuphela, kodwa nakuzo zonke ezinye izinhlobo zamandla kagesi ezidinga amanzi okupholisa.
Ubukhulu obuningi bobukhulu, ama-ratios nezinketho ze-Amarillo Gear zivumela umkhiqizo wethu ojwayelekile ukuthi uguqulwe ngokuvumelana nezidingo zohlelo. Amamodeli ajwayelekile ayatholakala ngensimbi yensimbi, eyehlisa amanani abo kanye nezikhathi zokuhola. Kusetshenziswa kuphela imikhiqizo ephezulu kanye namabhere asezingeni eliphakeme emikhiqizweni ye-Amarillo Gear. Ukukhohlwa kwamaGiya kuvela emithonjeni ehamba phambili e-United States. Insimbi nensimbi esetshenziselwa ukwakhiwa ivela eNyakatho Melika. Amagiya ka-Amarillo Gear akhiqizwa futhi kuphathwa ukushisa esitshalweni sethu eTexas. Ukuqinisekisa ikhwalithi yama-gearbox wama-angle ethu angakwesokudla, yonke i-Amarillo Gear pump drive iyahlolwa futhi kufanele idlulise izidingo zethu zohlelo lwekhwalithi le-ISO 9001: 2015 ngaphambi kokuthi zithunyelwe.
I-Amarillo Gear ingenza ngezifiso ukuhlolwa ukwanelisa izidingo zohlelo lwakho lokumpompa. Onjiniyela bethu nochwepheshe bethu baqeqeshelwe ukukala ngokufanele zonke izimo zokusebenza, kanye nokunikeza ukuhlaziywa kwezimo ezivela emkhakheni, kufaka phakathi nezimo zokudlidliza.
Noma ngabe idrayivu yakho yepompo ye-angle engakwesokudla idinga ini, i-Amarillo Gear inesixazululo.
Akukho okungavivinya imingcele yemishini efana nemvelo yasolwandle. Izinsizakusebenza kumele zibe lukhuni ngokwedlulele ukumelana nezidingo ezinzima zokuthi izindawo zasolwandle zikhona futhi zihlale zithembekile. Kungakho i-Amarillo Gear idizayinele futhi yakha ama-driver abo empompo engakwesokudla ukusingatha lezi zinhlelo zokusebenza ezidinga usizo. Kuyimishini ongayethemba uma uyidinga kakhulu.
I-lubrication ekhethekile kawoyela, ukumbozwa kwasolwandle, ukuvimbela ukungena kwamanzi kanye nama-alloys akhethekile ayatholakala ukuqinisekisa ukuthi i-Amarillo Gear pump drive yakho izohlala iminyaka. Noma ngabe isikebhe siphethe i-petroleum, i-petrochemicals, i-asphalt, i-liquid concentrate, amanzi ahlanzekile, ama-pellets e-sulphur noma ama-molasses, ungaqiniseka ngokuthembeka okwakhelwe kuwo wonke amaphampu we-Amarillo Gear drive.
Amarillo 2BL Right Angle Pump Drive Gear Drive, 70 Hp, 70 HP, 1 To 1 Ratio, RH Drive, LH Pump, 4 Bolt Flange, SN: 2BL 51268
Le nto ayizange ihlolwe ngokuSebenza futhi akukho ziqinisekiso ngombandela noma ukusebenza okwenziwa yithi. Kungumsebenzi womthengi ukuthi ahlole leyo nto, ngaphambi kokubhida, bese ezenzela ukuhlolwa kwakhe mayelana nesimo sento nokufaneleka kwento leyo. Konke Kuthengiswa 'Njengoba Kunjalo, Kuphi.' Asinasibopho sanoma yiziphi izitatimende mayelana nento eyenziwe nguMthengisi.
Umshayeli wemoto umane nje uyiswishi, ngoba i-motor drive yamanje inkulu kakhulu noma i-voltage iphezulu kakhulu. Lapho iswishi ejwayelekile noma izinto ze-elektroniki zingenakusetshenziswa njengokushintsha ukulawula imoto, kufanele kufakwe lokho okuthiwa umshayeli ukulawula imoto.
Umsebenzi womshayeli wemoto: Umsebenzi womshayeli wemoto usho indlela yokulawula isivinini esingenzi lutho semoto ngokulawula i-angle yokujikeleza nokusebenza kwejubane lemoto ukufeza ukulawula komjikelezo womsebenzi.
Umdwebo wesekethe wesifunda wesifunda se-motor drive: Isifunda sedrive drive singaqhutshwa nge-relay noma nge-transistor yamandla, noma singaqhutshwa yi-thyristor noma ithubhu yensimu yensimu ye-MOS. Ukuze uvumelane nezidingo zokulawula ezahlukahlukene (njengamanje nokusebenza kwamandla we-motor, ijubane lemoto, ukuqhubekisela phambili nokulawula okuphambene nemoto ye-DC, njll.), Izinhlobo ezahlukene zamasekethe wemoto kufanele zihlangane izidingo.
Imoto kagesi ayiqali uma inamandla, futhi kunzima kakhulu ukuyiphusha, ihambisana nomsindo othi "thumping kick". Lesi simo senzeka ngoba ucingo lwezimoto lunama-short-circuited ngenxa yokuxhumana koxhumano olubonakalayo. Izintambo ezintathu eziwugqinsi zemoto zingavulwa futhi inqola iyasebenza futhi iyanyamalala, okukhombisa ukuthi isilawuli siphukile futhi sidinga ukushintshwa ngesikhathi. Uma kusenzima ukukusebenzisa, kusho ukuthi kunenkinga ngemoto, engadalwa isekhethi elifishane nokudinwa kwekhoyili yemoto.
I-Amarillo Gear Company yaqala ukuklama nokukhiqiza ama-Spiral Bevel Right Angle Pump Drives ngo-1934, ikakhulukazi embonini yokunisela. I-Amarillo Gear Pump DriveNamuhla, amamodeli ajwayelekile afaka izinhlobo eziningi zokushayela ezinhlotsheni nasezilungiselelweni eziningi. Onke amagiya womoya wokuvunguza anemba ngomshini kusuka ensimbi ye-nickel alloy, ikesi eliqinile, futhi elilethwe ngababili. Ukusebenza kahle kuyahluka ngejubane, amandla, nokugxila. Amabanga ajwayelekile asebenza kahle ngama-96-98%.
Impompo ye-magnetic drive wuhlobo olusha lwepompo elingenamthungo elisebenzisa umgomo wobuchwepheshe bokudlulisa uzibuthe unomphela ukubona ukudluliswa okungathintwa kwe-torque. Akukho ukuxhumana okwenziwe ngomshini phakathi kwe-shaft yokushayela kanye ne-shaft eqhutshwa, futhi akukho sici esinamandla esidingekayo esakhiweni. Ngakho-ke, lolu hlobo lwepompo alunaso uphawu futhi lungafinyelela ukuvuza okungu-zero. Ilungele ikakhulukazi ukuhambisa okuvuthayo, okuqhumayo, okushintshashintshayo, okunobuthi, kanye nokugqwala noketshezi oluyigugu, amaphampu kazibuthe asetshenziswa kakhulu ezimeni lapho ipompo lingavuza khona kancane noma cha, nasezikhaleni eziphakeme lapho izimpawu zemishini zinzima ukuphatha . Eminyakeni yamuva nje, ipompo isetshenziswe kabanzi ezimbonini ze-petroleum, amakhemikhali, i-electroplating, ezemithi, ukudla, ukukhethwa kwamaphepha, izimboni zokuphrinta nokudaya phesheya.
Iphampu yamagnetic gear inesakhiwo esihlanganisiwe, ukubukeka okuhle, usayizi omncane, umsindo ophansi, ukusebenza okuthembekile, nokusetshenziswa nokugcinwa okulula. Ifanele uphethiloli, amakhemikhali, ezemithi, ukuncibilikisa, ukufakela ugesi, ukuvikela imvelo, ukudla, ukuvikela izwe kanye nezinye izimboni. Isetshenziselwa ukuthutha oketshezi oluvuthayo, oluyiziqhumane, oluguquguqukayo, olunobuthi, olungajwayelekile noluyigugu kanye noketshezi oluhlukahlukene olonakalisayo, kanye nemishini esekelayo yokuhambisa amanzi, kanye nezihlungi ezisekelayo. Imishini ekahle ilungele ukuhambisa uketshezi nge-lubricity ethile ngaphandle kwezinhlayiya eziqinile nemicu ngenkathi kwenziwa izimboni ezahlukahlukene. Amaphampu egiya lensimbi engagqwali angakhethwa ezimweni ezonakalisayo noma ezinezidingo eziphakeme zenhlanzeko.
ama-angle gear gear drives "a" series gear drives composite drive drive shafts large industrial industrial drives drives angle angle pump drives quantum parallel shaft fan drive standard spiral bevel gears. zitholele okwakho okuvela ku-database yezincwajana ezingaphezu kuka-27000. thola noma iyiphi ibhukwana lomkhiqizo elethwe kuwe kungakapheli amahora angama-24. ukulanda ngokushesha ibhukwana lomsebenzisi wakho - ngaphezu kwama-27 amabhukwana onawo. ibhokisi 000 amarillo, tx 1789 imibhalo ikhathalogi yomkhiqizo ukuphathwa kukawoyela ibhokisi lokuvuselelwa livuselelwa izingxenye zokusebenza ezisebenzayo izincwadi zokulungisa amamanyulethi ama-cashe amamodeli we-cad imininingwane yolwazi iso isitifiketi semisebenzi amathuba emisebenzi online.
Uhlobo lwe-shaft engakwesokudla imvamisa luyisinciphisi sesibungu, esibonakala ngesilinganiso esikhulu sokudlulisa, ukusebenza okuzinzile, umsindo ophansi, nokusebenza kahle okuphansi lapho usayizi wangaphandle ungekho mkhulu. I-single-stage worm reducer isetshenziswa kakhulu kunazo zonke. Isigaba sesibili sokunciphisa isibungu sisetshenziswa kancane.
Uhlobo lwe-shaft olufanayo ngokuyinhloko linciphisa igiya, elibonakala ngokusebenza kahle okuphezulu nokuthembeka, impilo yokusebenza ende nokugcinwa kulula, ngakho-ke inezinhlelo ezahlukahlukene zokusebenza. Isinciphisi segiya singahlukaniswa sibe sigaba esisodwa, izigaba ezimbili, izigaba ezintathu kanye nezigaba eziningi ngokuya ngenani lezigaba zegiya lokunciphisa; ngokusho kokuhlelwa komphini wayo esikhaleni, ingahlukaniswa ibe mpo futhi ivundle; ngokuya ngezimpawu zomdwebo wayo wokunyakaza Ungahlukaniswa ngohlobo lokukhulisa, uhlobo lwe-coaxial nohlobo lokugeleza kokuhlukanisa. Izinzuzo nobubi bazo ngokulandelana bungatholakala kwimanyuwali yokwakhiwa kwemishini.
Phakathi kohlobo lwe-coaxial, kukhona izinciphisi zamagiya, izinciphisi zamagiya aseplanethi kanye nama-cycloid reducers. Ukwehliswa kwegiya kwamaplanethi kunezinzuzo zokwehliswa okukhulu kwesilinganiso, usayizi omncane, isisindo esincane, nokusebenza kahle okuphezulu. Ezimweni eziningi, ingangena esikhundleni sezinciphisi ezijwayelekile zesigaba sesibili nesithathu. Isinciphisi se-cycloidal pinwheel sinokunciphisa okukhulu, ukusebenza kahle kokudlulisa, usayizi omncane, isisindo esincane, ukwehluleka okumbalwa, impilo ende, ukusebenza okuzinzile nokunokwethenjelwa, umsindo ophansi, ukuqaqa okulula nomhlangano, ukugcinwa okulula, isakhiwo esilula, umthamo oqinile wokulayisha ngokweqile, ukumelana nomthelela , Isikhathi esincane se-inertia nezinye izici.
Lapho ukhetha uhlobo lwesinciphisi, kuyadingeka ukwenza ukuhlaziywa okuphelele nokuqhathanisa ngokuya ngezidingo zokulungiswa konke kokudluliswa, kuhlanganiswe nokusebenza kahle, ubukhulu bangaphandle noma ikhwalithi yokwehlisa, izindleko zokukhiqiza nezokusebenza nezinye izinkomba ku uku-oda ukuthola imiphumela enengqondo kunazo zonke.
Ukudluliswa; Kusho ukudluliswa kwamandla phakathi kwemishini. Kungashiwo futhi ukuthi amandla e-mechanical adluliselwa kwimishini yokugcina ngokusebenzisa umaphakathi ophakathi. Le ndlela yokudlulisa ifaka phakathi ukudluliswa kwamaketanga, ukudluliswa kwezingxabano, ukudluliswa kwe-hydraulic, ukudluliswa kwamagiya nokudluliswa kwebhande.
Imodi yokushayela yepompo: i-pulley drive (injini kadizili noma injini kaphethiloli), i-motor motor stator drive
Ama-pumpriving centrifugal afaka phakathi ama-motors kagesi, izinjini zikadizili, ama-turbines e-steam nezinye izinto ezihamba phambili.
Wonke amadrayivu ahlinzekwa ngamagiya womoya womoya akhiqizwa yi-Amarillo Gear Company kumshini wethu wemodemu kusetshenziswa imishini yakamuva yakwaGleason. Ukuthintana kwamazinyo nge-Optimum nokusebenza okuphezulu kuvikelwe ngokuhlaziywa komklamo okusizwayo
nokunamathela ngokuqinile ezindinganisweni zakamuva ze-AGMA.
Amalungiselelo amathathu wokufaka (i-Standard, Heavy, ne-Extra Heavy) anikezwa kumodeli ngayinye ukuqinisekisa ukuthi ukuthwala okufanele kuyatholakala ngisho nakuhlelo lokusebenza olungajwayelekile. Ukwethembeka okuphezulu kuqinisekiswa ngokusebenzisa kuphela amabombo avela kuzakhi eziholayo ezikhiqizwayo nangokukhetha kuphela amabheringi adlula i-AGMA
Kunconywa impilo yokuklama.
Izindlu ezakhiwe kahle ezenziwe ngo-prec1s10n zivikela amagiya afanele nokuqondaniswa kokuthwala ngenkathi kuhlinzeka ukuqina, ukumelana nokushaqeka nezimpawu zokunciphisa okudingekayo.
Yenziwe ngensimbi eshisiwe ephethwe ukushisa enosayizi ofanele ukunikeza impilo ephezulu kanye nokuphambuka okuncane.
Uwoyela opholile nohlungiwe uhanjiswa ngaphansi kwengcindezi kuwo wonke amagiya namabhere yimpompo kawoyela ehamba kahle egiya. Uwoyela wokunisela igobolondo neshubhu yokushisa ithubhu iqinisekisa ukuthi uwoyela uhanjiswa kuwo
izinga lokushisa elifanele kanye viscosity. Uma kwenzeka amanzi okupholisa engekho, uwoyela opholisa umoya uyatholakala. Sicela uxhumane nefektri yethu.
UKWAKHIWA KAHLE KAHLE.
I-Amarillo Gear Company yayiyiphayona lokuqala ekusetshenzisweni nasekufezekisweni kwaleli lungiselelo lokubeka uphawu eliyingqayizivele elinikeza ukuvikeleka okuphezulu ekuvuzeni kokukhipha shaft.
UKUSEBENZA. Ukusebenza kahle kuyahlukahluka
isivinini, amandla kanye ne-thrust, ngamabanga ajwayelekile angama-96-98%. Xhumana nefektri ngamanani wangempela wohlelo lwakho lokusebenza.
Kuyatholakala kuwo wonke amamodeli uma kudingeka.
INDLELA YOKUKHETHA IDrayivu:
Imininingwane elandelayo iyadingeka ukuze ukhethe kahle:
• Imfuneko yamandla wehhashi.
• I-rpm yokufaka nokukhipha
• Isici Sesevisi.
• Ukugxila kwangaphandle.
• Ingabe umgodi wokukhipha oyize noma oqinile
• Ingabe kudingeka okungaphindiselwa emuva kudingeke?
• Kuyini ukuzungezisa shaft?
1. Hlukanisa i-rpm yokufaka ngokukhipha i-rpm ukuze
thola isilinganiso esidingekayo segiya.
2. Khetha isilinganiso esiseduze kakhulu kuthebula # 1.
3. Qhubeka phansi ngekholomu yesilinganiso kuze kube yilapho i-
isilinganiso samandla wehhashi esidingekayo sitholakala ngaphansi
i-pump rpm (Ukuhumusha njengoba kudingeka